रोगहरूसँग लड्न निद्राको भूमिका, कुन उमेरले कति घण्टा सुत्ने ?
विराटनगर, १५ भदौ । कोरोना संक्रमणलगायतका विभिन्न रोगहरूसँग लड्नका लागि निद्राको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
सुत्ने समय र मान्छेको मानसिक अवस्थाबीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्ने मानिसमा इम्युनिटी पावर कम हुने, मानसिक समस्या र चिन्ता बढी देखाएको छ । रातिको समयमा पर्याप्त सुत्ने व्यक्तिको इम्युनिटी पावर राम्रो हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् । निन्द्रा नपुगेका दिनमा दिनभर ताजगी अनुभव गर्न सकिँदैन ।
साथै जोश, जाँगर, उमंग तथा उत्साह मुर्झाएकोसमेत अनुभव हुन्छ । त्यस्तै राम्रोसँग निद्रा परेको समयमा स्वास्थ्य अनुभव हुन्छ । राति ७ देखि ९ घण्टा सुत्दा मेलाटोनिन नामक हर्मोनको उत्पादन राम्रो हुन्छ, जसले मानिसलाई खुसी राखी रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर, कति उमेरको मान्छेले कति घण्टा सुत्ने गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्नले धेरैजसो मानिसहरूलाई सताइरहेको हुन्छ ।
१४ देखि २५ वर्षसम्मका व्यक्तिहरूले हरेक दिन ८ देखि १० घन्टा सुत्नु पर्छ । यस्तै, २६ वर्षदेखि ६४ वर्षका व्यक्तिहरुले दिनमा ७ देखि ९ घन्टासम्म सुत्न आवश्यक हुने गर्छ । ६५ वर्षका पाका मानिसहरुलाई दैनिक ७ देखि ८ घन्टा सुत्दा पर्याप्त निद्रा पुग्छ ।